अब चालक र कार्यालय सहयोगी पनि स्थायी हुनुपर्ने « Pathibhar Online
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा अब चालक र कार्यालय सहयोगी पनि अस्थायी पदपूर्ति गर्न नपाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चालक र कार्यालय सहयोगी पनि स्थायी रुपमै पूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकले चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार वा अस्थायी नभइ स्थायी पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो । आवश्यक कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन र व्यवस्थापन गरी ती पदलाई थप जिम्मेवार बनाउन स्थायी पदपूर्ति गर्दा नै उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष छ । ती पदलाई यसअघि कानूनमा उल्लेखित श्रेणीविहीन शब्दलाई हटाई राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको दर्जा उल्लेख गर्न बैठकमा सहमति भएको छ ।
यसैगरी राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति सत प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति हुनेछ । सांसदहरुले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी , खरिदार पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि मौका दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । राजपत्र अनङ्कित तृतीय (मुखिया) र चतुर्थ बैदार श्रेणीका पद भने नयाँ कानूनमा खारेज हुने भएका छन् ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण ललितपुरमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै
नयाँ नक्सा : संविधान संशोधनमा कांग्रेस अनिर्णित हुँदा ‘भारत खुसी’
काठमाडौं हालै जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिन सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावबाट प्रमुम प्रतिपक्ष
वामदेवले छोडे प्रचण्ड-माधव गठबन्धन : प्रधानमन्त्री ओलीलाई वहुमत !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रचण्ड- माधव गठबन्धनका संयोजनकर्ता रहेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले
नेकपा सत्तासंघर्षः चिसै पानीले नुहाउने कि बाक्लो दाल खाने ?
चरम सत्ता संघर्षमा फसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद भूसको आगो झै सल्किएर